Muslimoonni Itoophiyaa tajaajila baankii dhala-maleessaa argachaa jiran - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Muslimoonni Itoophiyaa tajaajila baankii dhala-maleessaa argachaa jiran
Muslimoonni Itoophiyaa tajaajila baankii dhala-maleessaa argachaa jiran
Tajaajilli baankii dhala-maleessaa(Interest Free Banking-IFB) Itoophiyaa keessatti kan eegale Onkoloolessa darbe. Erga tajaajilli kun eegalee hanga Waxabajjii 2015’tti namoonni 105,000 Birrii biliyoona 1.5 baankii keessatti kuusachuu danda’aniiru, akka ibsa Baankii Daldala Itoophiyaatti.
Muslimoonni biyyattii heddu dhala dheefaaf jecha tajaajila baankii irraa yeroo dheeraadhaaf fagaatanii turuu isaaniiti mataan damee wolqunnamtii Baankii Daldala Itoophiyaa ob. Efreem Makuriyaa World Bulletinitti kan hime. Muslimoonni %40 ummata itoophiyaa ta’uu isaaniiti kan ragaaleen Istaatistiksii adda addaa agarsiisan.
Itoophiyaa keessatti, biyya ummata miliyoona 95 ol qabdu, namoonni kaardii baankii qaban naannoo miliyoona 20 ti.
Sadarkaa addunyatti dhaabbilee tajaajila baankii dhala-maleessaa laatan 300 oltu jira. Hedduun isaanii kan argaman Maleezhiyaa, Sa’uud Arabiyaa, Bahreen, UAE, Kuweet, Kataar, Suudaan, Iraan, Paakistaan, Masrii, Baanglaadish fi Indooneezhiyaa keessatti.
Tajaajilli baankii Islaamaa (dhala-maleessaa) addunyaa irratti kan eegale bara 1960’n keessa.
baankii dhala maleessa
Previous articleQaalawiinsa gatii hoteelaatiin Finfinneen Afrikaa keessatti sad. 1ffaa irratti argamti
Next articleYunivarsiitii booda daandilee 5’n barumsa dabalataa ittiin argachuun danda’amu